လက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက် အိုင်ဒီယာများ - fastforward
ကိုယ်ချစ်ရ၊ ခင်ရတဲ့ မွေးနေ့ရောက်ရင် ဘာပေးရမလဲဆိုတာ ခေါင်းစားဖူးပါသလား?
ကိုယ်ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိဘ၊ ဆွေမျိုး၊ မောင်နှမကိုပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ဆောင်ပေးလို့ရအောင် လူကြိုက်များတဲ့လက်ဆောင်အမျိုးအစားအခု (၂၀) ကို စာရင်းလုပ်ပေးထားပါတယ်။
ယောကျ်ားလေးနဲ့ မိန်းကလေးအတွက် လက်ဆောင်ပေးလို့ရမယ့် အမျိုးအစားခွဲပြီးပြောပြပေးသွားပါမယ်။
ယောက်ျားတွေမွေးနေ့ဆိုရင် လက်ဆောင်ရတာရှားတတ်တာရှားတယ်။ မွေးနေ့လက်ဆောင်ကိုဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမပြောတတ်တော့ ဘာပေးရမလဲမသိဖြစ်နေရင်တော့ အခုပြောပေးမယ့်ပစ္စည်းလေးတွေက တကယ်အကြိုက်တွေ့စေမယ့်ပစ္စည်းလေးတွေပါ။
1.Gamdias Eros M2 Gaming Headset
Price: 23,922 kyats
တကယ်လို့ သင့်ရဲ့အကိုဒါမှမဟုတ် ဂိမ်းဆော့လေ့ရှိတဲ့အသိယောကျာ်းလေးဆိုရင်တော့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာ gaming headset ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနားကြပ်က ဂိမ်းဆော့တဲ့အခါမှာ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ အသံနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားရစေပြီးတော့ နားကြပ်တစ်ခုရဲ့အစွမ်းနဲ့ ဂိမ်းဆော့နေတာနဲ့မတူဘဲ ကိုယ်တိုင်ဂိမ်းထဲရောက်သွားရတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးခံစားရစေမှာအမှန်ပါပဲ။ ဒါတင်မကသေးဘဲ အရောင် (၅) မျိုးအထိ ရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရတဲ့ multi-color lighting ဖြစ်တဲ့အပြင် ပြင်ပဆူညံသံတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပေးတဲ့ noise cancelling ပါတယ်။ နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့အချက်က PS4 နဲ့ပါချိတ်သုံးလို့ရတာဆိုတော့ အကြိုက်ပါပဲ။
2.Gamdias Achilles -E1L Gaming Chair (Red)
Price: 207,324 kyats
ဒီ gaming chairs တွေက သက်သောင့်သက်သာဂိမ်းဆော့လို့ရသလို ဂိမ်းမဆော့ရင်တောင် ၁၅၀ ဒီဂရီလှည့်ပြီးထိုင်ဆော့နေလို့ရတယ်။
3.CF Comfort Leather Brown Belt
Price: 19,000 kyats
ဒီသားရေခါးပတ်က ဖက်ရှင်ကျစေချင်တဲ့သူတွေအတွက် မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ပဲတွဲတွဲ၊ ဘောင်းဘီအမဲနဲ့ပဲတွဲတွဲ ခေတ်မှီစမတ်ကျတဲ့ဖက်ရှင်ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
4.Imperial Black Zip around wallet from Yangoods
Price: 99,000 kyats
ဒီပိုက်ဆံအိတ်လေးက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ခေတ်မီပြီးတော့ vegan leather လည်းဖြစ်တဲ့အတွက် သူမတူတဲ့အမြင်နဲ့ သေသပ်လှပလွန်းပါတယ်။ ဒီလိုအိတ်မျိူးဆို အဖေ့ကိုလက်ဆောင်ပေးရင်အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။
5.Clip Pac Blue Jan Water Bottle 800 ml
Price 4,300 kyats
ရေအသက်တစ်မနက်ဆိုတဲ့အတိုင်း လူတိုင်းရေမသောက်ဘဲမနေနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်နေ့တာမှာ ရေသောက်နည်းတဲ့သူတွေရှိတတ်တာကြောင့် တကယ်လို့ ကိုယ်ပိုင်ရေဗူးနဲ့သာဆိုရင် ရေသောက်ဖို့လည်းသတိရစေတယ်။
Price: 220,000 kyats
ဒီလက်ဆောင်ရတဲ့သူကတော့ မကြိုက်ဘဲကို မနေပါဘူး။ Airpods တွေက အသံထွက်အားအရမ်းကောင်းတဲ့အပြင် ဖုန်းပြောရင်လည်း ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိတယ်။ ပေါ့ပါးတယ်၊ သုံးရတာလည်းလွယ်တဲ့အပြင် သုံးဖူးသူတိုင်းအကြိုက်ဖြစ်နေတဲ့ airpod2 ကိုဝယ်ချင်တယ်၊ လက်ဆောင်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Wai Yan Electronics ကနေလည်း မှာယူနိုင်ပြီနော်။
7.Remax RB-M28 portable waterproof wireless speaker
ထသွားထလာဘယ်နေရာမဆို သယ်သွားလို့ရသလို ခရီးသွားရင်လည်း အလွယ်တကူသယ်သွားလို့ရတဲ့ ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်နားထောင်လို့ရတဲ့ remax စပီကာက ရေစိုခံတဲ့အပြင် အနက်ရောင်၊ အပြာနဲ့ အစိမ်းရောင်ဆိုပြီး ရွေးချယ်စရာအရောင် (၃) ရောင်လာပါတယ်။
8.Gamdias Ares M1 Gaming Keyboard
Price: 25,982 kyats
gamer တွေအကြိုက် လှပတဲ့ RGB ရောင်စုံမီးရောင်နဲ့ တစ်နှစ်ကျော်လောက်ထိ အာမခံချက်ရှိတဲ့ gaming keyboard ဖြစ်ပါတယ်။
Price: 20,900 kyats
ဒီဇိုင်းဆန်းပြီး လူကြီး၊ လူငယ်မရွေး ဝတ်လို့ရသလို ဈေးနှုန်းလည်းသက်သာတဲ့အတွက် လက်ဆောင်ပေးရင်လည်း သင့်တော်စေမှာပါ။
10. CF Comfort Men’s Hoodies – Black
Price: 25,500 kyats
cotton နဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ သက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရာသီဉတုနဲ့သင့်တော်ပါတယ်။ ဒီ hoodie က ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖက်ရှင်မျိုးလည်းဖြစ်စေတဲ့အတွက်လက်ဆောင်ပေးရင်ကြိုက်ကြမှာအမှန်ပါပဲ။
မိန်းကလေးတွေရဲ့အကြိုက်ကိုသိဖို့ဆိုတာ တော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါ။ များသောအားဖြင့်တော့ မိန်းကလေးတွေက အဝတ်အစား၊ မိတ်ကပ်ပစ္စည်း၊ skincare နဲ့ အစားအသောက်တွေကိုလိုချင်တာများကြတယ်။ ဒါပေမယ့် မိတ်ကပ်ဆိုလည်း ဘယ်လိုမိတ်ကပ်အမျိုးအစားတွေလဲ၊ ဘယ်တံဆိပ်တွေကသင့်တော်တာလဲဆိုတာကို မသိနားမလည်ကြတာများတယ်။ ဒါကြောင့် မိန်းကလေးအများစုကြိုက်နှစ်သက်စေမယ့် တံဆိပ်နဲ့ ပစ္စည်းတစ်ချို့ကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
1. Bella Eyeliner Artist Brush 001 Jet Black
Price: 3,350 kyats
Eyeliner ကောင်းကောင်းဆွဲတတ်ဖို့ဆိုတာ မိတ်ကပ်ပြင်တာရဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့အတွက် Bella Eyeliner က ရေစိုခံပြီးတော့ ဆွဲရလည်းလွယ်တဲ့အတွက်မိန်းကလေးတွေအကြိုက်ဖြစ်မှာပါ။
2. Sai Tint Tint Lip Tattoo
Price: 14,000 kyats
Sai Tint Tint Lip Tattoo ဆိုးတဲ့အခါ အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ mask တပ်ပြီးအပြင်သွားရင်တောင် မပျက်သွားဘဲ နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာအကြာကြီးခံတော့ ခဏခဏထုတ်ဆိုးစရာမလိုတော့ဘူး။
Price: 49,900 kyats
တကယ်လို့ ကော်ဖီပူပူသောက်တတ်တဲ့ကောင်မလေးဆိုရင် ရေနွေးအိုးကောင်းကောင်းတစ်လုံးလက်ဆောင်ပေးတာ အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ ကော်ဖီမှမဟုတ်ဘူး၊ လက်ဖက်ရည်ပဲသောက်မလား၊ အချိန်မြန်မြန်နဲ့ ရေနွေးတည်လို့ရတဲ့ ရေနွေးအိုးလေးရရင် ပျော်နေမှာအမှန်ပါပဲ။
4. iPhone 11 pro max 1st copy cover
Price: 17,000 kyats
iphone 11 pro max အတွက် ဖုန်းကာဗာကောင်းကောင်းရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ အကြည်ရောင် ကာဗာလေးနဲ့ အကြမ်းလည်းခံ၊ အကြည်ရောင်ပေါ်မှာကိုယ့်စိတ်ကြိုက် DIY စမ်းလုပ်လို့ရတဲ့ ဒီကာဗာလေးကို မိန်းကလေးတွေသဘောကျကြပါတယ်။
5. Be Comfy Bean Bag (Large) in Navy Blue
Price :175,000 kyats
ကိုယ့်အိပ်ခန်းလေးထဲမှာ bean bag လေးတစ်လုံးရှိနေရင်ဘယ်လောက်တောင်ကောင်းမလဲ။ bean bag တွေက အိပ်ယာပေါ်မှာမအိပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တောင် သက်သောင့်သက်သာနဲ့လဲလျောင်းအနားယူလို့ရတယ်။
6.Maybelline Colossal Waterproof Mascara
Price: 16,600 kyats
ဆိုင်တိုင်းမှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရပြီးတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ လူကြိုက်အများဆုံး mascaras ဖြစ်ပါတယ်။
7. Moezy Thanakha Face Mask
Price: 2,200 kyats
မိန်းကလေးတိုင်းကတော့ တစ်နေ့ကိုတစ်ကြိမ်လောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဂရုစိုက်တဲ့အနေနဲ့ skincare လုပ်ကြတယ်။ သနပ်ခါးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ဒီ mask က အသားအရေကိုတောက်ပစေပြီး ချောမွေ့စေတဲ့အတွက် မိန်းကလေးတွေအကြိုက်ဖြစ်မှာပါ။
8.Kalayar Dusty Rose Boston Bag from Yangoods
Price: 79,900 kyats
vegan leather နဲ့ ချည်သားရောစပ်ပြီးပုံဖော်ထားတဲ့ Yangoods ကအိတ်တွေက ဘယ်နေရာကိုပဲကိုင်သွားသွား လိုက်ဖက်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့ ဒီလိုလက်ဆောင်မျိုးဆို မိန်းကလေးတွေအကြိုက်မို့ အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။
9. Ferrero Rocher Chocolate Hazelnut T-30 375 Grams
Price: 20,100 kyats
လက်ဆောင်လည်းပေးချင်တယ်၊ ဘာပေးရမလဲသေချာစဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ ချောကလက်က အသင့်တော်ဆုံးပါ။ မိန်းကလေးအများစုကလည်း ချောကလက်မကြိုက်တဲ့သူမရှိသလောက်ရှားတာဖြစ်လို့ လက်ဆောင်အနေနဲ့ရတယ်ဆိုရင် ပျော်သွားပါလိမ့်မယ်။
10. Garnier Micellar Cleansing Water Pink 400ml
Price: 9,050 kyats
ကိုယ်လက်ဆောင်ပေးမယ့် မိန်းကလေးက မိတ်ကပ်လိမ်းတတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ မိတ်ကပ် remover ကမရှိမဖြစ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ Garnier Micellar Cleansing Water က သုံးရတာနူးညံ့ပြီးတော့ အသားအရေမပျက်ဆီးအောင်ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့အတွက် အရေပြားအတွက် အကောင်းမွန်ဆုံးပါပဲ။
သူငယ်ချင်း၊ မိဘ၊ မောင်နှမ ဘယ်သူ့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုရင် တကယ်အသုံးဝင်ပြီးအမှတ်ရနေစေမယ့်လက်ဆောင်မျိုးဖြစ်ရင် အကောင်းဆုံးပါ။ အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့ လက်ဆောင်ပေးလို့ရတဲ့ အိုင်ဒီယာလေးတွေကိုကြိုက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့တခြားအိုင်ဒီယာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်း comment ရေးပေးခဲ့ပါဦးနော်…။
PrevPreviousသင့်လုပ်ငန်း eCommerce စတင်ဖို့ လိုကြောင်းပြနေတဲ့ အချက် ၅ ချက်
သင့်လုပ်ငန်း eCommerce စတင်ဖို့ လိုကြောင်းပြနေတဲ့ အချက် ၅ ချက်
Ecommerce တွေက အရမ်းကို လူဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာ ဈေးဝယ်သူတွေက အွန်လိုင်းကနေ ဈေးဝယ်ရတာကို ပို သဘောကျလာကြသလို ရောင်းသူတွေကလည်း ဒီ ဝယ်လိုအားကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ ၊ လုပ်ငန်းအကြီးအသေးအလိုက် ကိုယ့် ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချရဖို့ အခွင့်ကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။ မိတ်ဆွေက အခုထိ အွန်လိုင်းမှာ ဈေးကွက် မစသေးဘူးဆိုရင်
ကိုယ့်ရဲ့Brand ကိုအခုလိုကာလမှာ ဘယ်လိုခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်မလဲ။
ကိုဗစ်၁၉ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုက ကုမ္ပဏီတွေကို ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုသေချာပြန်စဉ်းစားဖို့ အချိန်ပေးလိုက်သလိုပါပဲ။ အပြောင်းအလဲတွေအများကြီးရှိလာတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းအတွက် အခွင့်အရေးအသစ်တွေလည်း ရှိလာနိုင်သလို အခုလိုအိမ်မှာနေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာ လူတွေကဒီဂျစ်တယ် ကွန်းတန့်တွေကိုပိုစိတ်ဝင်စားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီဂျစ်တယ် မားကတ်တင်းရဲ့ အခန်းကဏ္ဏကလည်း အရေးကြီးလာပါတယ်။ ဒီဘလော့ထဲမှာဆို Insightsတွေအားလုံးကို တစ်စုတစ်စည်းထဲဖော်ပြပေးထားလို့ ကိုယ့် Brand ကိုဘယ်လိုခိုင်မာအောင်ထိန်းသိန်းထားနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ လုပ်ငန်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့ Core
ကိုယ့်ရဲ့ teamကိုအဝေးကနေ အကောင်ဆုံးဘယ်လိုစီမံမလဲ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရက်စ်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုက လုပ်ငန်းခွင်တွေကို အတွေ့အကြုံအသစ်တွေ၊စာမျက်နှာအသစ်တွေကိုဖွင့်လှစ်ပြသလိုက်တာပါပဲ။ အခုဆိုရင်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ ရုံးတက်စရာမလိုပဲ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ မန်နေဂျာတွေနဲ့ အဝေးကနေပဲအလုပ်လုပ်ကြရတယ်ဆိုတာ အသစ်အဆန်းတစ်ခုမဟုတ်တော့ဘဲ လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ မန်နေဂျာတွေအတွက်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ Teamကိုအဝေးကနေပဲ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ ၁။နေ့စဉ် Check-Ins ပြုလုပ်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ team အပေါ် လိုအပ်တာတွေ အထောက်အပံပေးနိုင်ဖို့၊